Ukushaqeka kabili nge-CMA CGM ngemuva kokuqhuma kwetheku laseBeirut - teles
Ukushaqeka kabili nge-CMA CGM ngemuva kokuqhuma ethekwini laseBeirut
By Tchinde On Agasti 10, 2020
Izikhungo zaseLebanon zomnikazi wemikhumbi waseFrance, omsunguli wazo uJacques Saadé wazalelwa eBeirut ngonyaka we-1937, futhi ezihlinzeka ngamaphesenti angama-30 embobo echwebeni laseLebanon, zithinteke kakhulu kulokhu kuqhuma.
Ekupheleni kukaJulayi, uRodolphe Saadé, oyi-CEO yomthengisi we-CMA-CGM ubeseBeirut futhi uvezwa njalo eLebanon nsuku zonke. I-Orient-Le Jour imizwa yakhe: “Ngabona indlela isimo esinzima ngayo. Izwe lihamba kancane, hhayi ukusho ngesikhathi sokumiswa ”.
Wayekude nokucabanga ngenhlekelele eyayizogadla ezinsukwini ezimbalwa kamuva, ngo-Agasti 4, ethekwini yenhloko-dolobha, yabangela ukufa kwabantu abangaphezu kwe-130, ukulimala abangu-5 000 futhi kwabeka abantu abangama-300 emigwaqweni. Futhi imiphumela kabani enesihluku okunzima ukuyivivinya namhlanje.
Imbangela yalokhu kuqhuma okubili ngokuya ngezinto zokuqala: ukuqhuma kwemithwalo yamathani angaphezu kuka-2700 2013 e-ammonium nitrate egcinwe endaweni yokugcina izimpahla kusukela ngo-XNUMX. Kushiywe ngabathengisi bemikhumbi bayo baseMoldova, lo thwala wezimoto awukaze ukwazi ukufinyelela, kusukela, ogwini lwechweba laseBeira (Mozambique) lapho bekumele ihanjiswe khona, ngokombhalo wokuqala wemicimbi.
Ngoba ngoLwesine Agasti 6, abaphathi bamachweba baseMozambiki bakuphikile ngokusemthethweni ukuthi bebazisiwe ngokufika kwale mpahla ngaleso sikhathi. "Ukufika komkhumbi kumenyezelwe kusasele izinsuku eziyisikhombisa kuya nanhlanu," kusho iziphathimandla zaseMozambiki.
Ukuvinjezelwa kweLebanon kulimale kakhulu
“Yize umkhumbi ubesiya eBeira, ukuphela kokufika kwezimpahla kwakungeyona iMozambiki kodwa iZimbabwe noma iZambia, ngoba i-ammonium nitrate isetshenziselwa ukwenza iziqhumane embonini yezimayini. Futhi ngokusobala, lolu hlobo lwe-ammonium nitrate kwakungeyona olwalusetshenziselwa ezolimo (njengomanyolo) kodwa embonini yezokumbiwa phansi, "ngenxa yakhe ngokungazeleli watshela isikhulu esiphezulu ethekwini laseMozambiki ku-AFP.
Ukuqhuma kweBeirut: Ukutakulwa kuthungathwa osindile ...
ILebanon: uhla lwemigwaqo ka-Emmanuel Macron eBeirut ...
Ukuqhuma ethekwini laseBeirut: imiphumela ...
Ngokuqondene neqembu laseMarseille, elisungulwe ngumsunguli walo uJacques Saadé (oshone ngo-2018) eBeirut ngo-1937, ukushaqeka komcimbi kusazimisele. Ikakhulu selokhu indlunkulu yale nkampani, enikela ngamaphesenti angama-30 echweba laseLebanon, itholakala ngamamitha ambalwa ukusuka endaweni okuqhume kuyo futhi yalimala kakhulu, kusho inkampani esitatimendeni.
Phakathi kwabasebenzi abangu-261 bomnini wemikhumbi ezweni, sibabeke phansi ababili abalimele besesimweni esibucayi, ukulimala okuningi okuncane nokufa okukodwa, icacisa i-CMA CGM. Ngemuva kwenhlekelele, le nkampani imemezele ukumiswa kokuphanjaniswa kwemikhumbi yayo eTripoli (eLebhanoni, idolobha lesibili laleli lizwe elingamakhilomitha angama-85 ngasenyakatho neBeirut), ngenkathi ukufinyelela echwebeni kwenhloko-dolobha , isango elikhulu lezimpahla, belingasasebenzi.
Iqembu elavela eCompagnie maritime d'amronnement (i-CMA, elathola i-CGM, lavunyelwa ngonyaka ka-1996) lokwethula imigqa yokuqala enamakhompiyutha eMedithera, nokuyinto eyenzeka e-Afrika ngokuthola inkampani yokuthumela i-Delmas eBolloré ngo-2005. , okuphakelayo, ngaphandle kwenkinga yezimali ezweni lamaCedars, amaphrojekthi abalulekile.
Ihlotshaniswa nomqhudelani wayo kanye ne-MSC yase-Italy yaseSwitzerland, yafaka isicelo ngoJanuwari ukuthola imvume ethekwini laseBeirut ngokumelene nabathengisi baseHong Kongers China kanye neHutchinson kanye ne-Emirati Gulftainer. Ngokubambisana, amelela ama-80% emiqulu yePort of Beirut. Kepha i-CMA-CGM ibilindele ukuqaliswa kabusha kwenqubo yokunikezwa kwamathenda, imiswe lapho kubhekwa ubunzima bezempilo.
Leli qembu lenyuse isigxobo salo (laze lafika ku-78%) endaweni yokugcina izinto esise-Tripoli, futhi lase liqale ukusebenza endaweni yokugcina izimpahla ethekwini laseBeirut ekupheleni kukaJulayi, lifezekisa ukunikezwa kweCeva Logistics, elisanda kutholwa. , kanye nezindawo zokugcina efrijini ezihlose ukuthuthukisa umkhiqizo wezolimo wethafa laseBekaa.
“Bekulokhu njalo naseLebanon. Sikhona ukuze simeseke, simsize ukuphuma kule nkinga. Yingakho siqhubeka namaphrojekthi wamanje futhi sethula amasha. Siyaqhubeka nokuqasha futhi sitshale imali. Ngezenzo zethu, sifuna ukudlulisa umyalezo wethemba futhi sikhuthaze nabanye baseLebanon ukuba nabo benze ngendlela efanayo, ”kusho uRodolphe Saadé ekupheleni kukaJulayi. Amagama lapho izindaba zinikeza ukuqina okuqinile.
umthombo: https: //www.jeuneafrique.com/1026200/economie/explosions-de-beyrouth-le-double-choc-pour-cma-cgm/
ECameroon: IBafia kanye nelifa layo elinonya lamakoloni
Yini esiyaziyo ngokuqhuma okuphindwe kabili kwetheku laseBeirut eLebanon?
I-Togo: owesifazane esikhundleni sikaNdunankulu, owokuqala emlandweni wezwe